IIKHABINETHI EZIXINZELELWEYO ZEKHITSHI (IMIFANEKISO YOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabinethi eziXinzelelweyo zeKhitshi (Imifanekiso yoyilo)
Iikhabinethi eziXinzelelweyo zeKhitshi (Imifanekiso yoyilo)
Nantsi igalari yethu yeekhabhathi zekhitshi ezixineneyo kubandakanya neendlela zokuyila zokuzisa le ndlela yoyilo ekhayeni lakho.
Ukongeza iikhabhathi zasekhitshini ezixinzelelekileyo nakweyiphi na indlela yasekhitshini, nokuba yeyangoku okanye yeklasikhi, eya kuyinika ngokukhawuleza eyahlukileyo. Umbala oyingqayizivele kunye nokuthungwa kwongeza ekhitshini kwangoko kwongeza indawo egxile ekhitshini lakho, kwaye kuyinika imvakalelo efudumeleyo, yokuhlala ngaphakathi. Kule mihla, unoku-odola ngokulula ukufumana izinto ze-DIY ukufezekisa ukubonakala koxinzelelo kwiziqwenga zakho zefanitshala, kunye nokuthenga iibhodi ezenziwe kwangaphambili kunye neekhabhathi esele zigqibile.
Ukuba unee khabhathi zomthi eziqinileyo ekhitshini lakho kwaye ufuna ukuzikhathaza, ke unethamsanqa kuba kulula ukuxhalabisa iikhabhathi zokhuni ezikhoyo eziqinileyo. I-antiquing glaze inokungena ngokulula kwiingqolowa zomthi kwaye yenze imbonakalo entle.
Iikhabinethi eziGrey eziXinzelelweyo
Iikhabinethi eziMnyama eziXinekileyo
Iikhabhathi eziKhitshisiweyo eziBrown
Iikhabinethi eziDityanisiweyo ze-DIY
Ungazikhathaza njani iikhabhathi zasekhitshini
Ezi khabhathi zekhitshi zaseFrance zisebenzisa ukukhanya okukhanyayo okuqaqambileyo ukufezekisa oku kujonga okudala kwiikhabhathi ezimhlophe. I-glaze yayifakwe kancinci kwaye inqabile kugxininiso oluncinci lweenkozo, kodwa yanele ukungcolisa iikhabhathi ezimhlophe ezikhoyo ukufezekisa ithoni etyheli ukufana nekhabhathi ezimhlophe ezindala. Tyelela eli phepha ngeenkcukacha ezithe kratya malunga ukupeyinta njani iikhabhathi zasekhitshini ngezinto zakudala .
Eyona nto ilula ekubandezelekeni ziikhabhathi ezimhlophe, njengoko zithatha ngokulula ii-pigment zala mabala / eglasi. Iikhabhathi ezimhlophe ezindala / ezisetyenziswe kakuhle, kulula nokuba zisebenze nazo kuba mhlawumbi sele zigqithile kwizambatho zangaphambili zokukhusela.
Iikhikhini zesitayile selizwe ziya kujongeka zilungile ngeekhabhathi zekhitshi ezixinzezelekileyo. Ezi ntlobo zekhitshi zaziwa ngokubanzi ngenkangeleko yazo erhabaxa enoluvo olufudumeleyo nolusekhaya. Lo mzekelo ulungile ngokuqinisekileyo kwabo banelikhabhathi yelizwe elimhlophe okwangoku, kodwa ngandlela thile baswele ubushushu kunye nobuntu. Ngokusebenzisa ubuchwephesha obunzima bokudala ubumbeko obusanti / ipeyinti egugileyo, indawo emhlophe yekhabhathi emhlophe ibonakala ngathi iphila. Kule ndlela yakudala yaseSpain Ikhitshi elimhlophe lamandulo , indlela elula yokuphazamisa isandla nayo yaqeshwa, kodwa iyaqapheleka inika ugxininiso ngakumbi kwimijelo emincinci kunye neenkcukacha zokubumba kwekhabhinethi. Ngelixa imiphezulu ethe tyaba ingakhange yathanjiswa kancinci yi-glaze, ii-cervices ezincinci zavunyelwa ukuba zingene kwi-glaze ngakumbi ukuqhubekeka nokuzigxininisa, oko ke kongeza ubunzulu kunye nokuthungwa ngaphandle kweenkozo zomthi. Ngokufana nomzekelo wangaphambili, eli khitshi likhathazekile kancinci kugxininiso ngakumbi kwimijelo kunye nakwimisebenzi. Iglaze isebenzise ithoni eluhlaza emthubi ukuyinika ithinti epholileyo kakhulu.
I-White ayisiyiyo yodwa iikhabhathi onokuthi uxinezeleke kuzo. Ngapha koko unokuxinezeleka nawuphi na umbala wekhabhathi zasekhitshini, ngenxa yokuba usebenzisa umbala ofanelekileyo we-antiquing glaze yeziphumo ezilungileyo. Iikhitshi zesitayile sangoku kunye notshintsho ngokuqinisekileyo ziya kuhambelana nolu hlobo lweekhabhathi ezixinzelelweyo. Esi siqithi sasekhitshini sangoku sinesiseko sekhabhathi esingwevu esikhanyiswe ngombala omhlophe ngokukhanyayo ukuze sibenothuli / ukujonga okungcolileyo. Inkqubo esetyenziselwe ukuxinzelela isiqithi inika isibheno esingafezekanga esahlukileyo kwezinye ezigqibeleleyo nezicace gca kwisithuba, sinceda ukongeza ubukhulu ekhitshini.
Ngokungafaniyo nomnye umzekelo, le khitshi yakudala imnyama isebenzisa i-glaze emnyama ngakumbi kunombala osele ugqityiwe. Olu dibaniso lukhokelela kwimpembelelo efihlakeleyo enika indawo ubunzulu ngakumbi kunye nomzimba.
Ukutshatisa inkangeleko yanamhlanje ekhitshini, iikhabhathi ezikhanyayo ezingwevu zazingonwabanga. I-glaze yayisetyenziselwa ubukhulu becala kwimigca / kwimisebenzi yekhabhathi ukomeleza ngakumbi iinkcukacha ezincinci zekhitshi.
Indlela eyahlukileyo yezinto zakudala yaqeshwa kwiikhabhathi ezingwevu zale khitshi emileyo eyi-U. Indlela yesiqhelo isebenzisa i-antiquing glaze enye emnyama ngakumbi kunaleyo sele ikhona, kodwa ihlala ihlala kusapho olunye lombala. Nangona kunjalo, ezi khabhathi zisebenzise imibala emi-2 eyahlukeneyo ukuze kubonakale ngathi ipeyinti iye yaphela kwiikhabhathi zomthi. Ithoni ye-beige ekhanyayo yayisetyenziswa kwimivumbo engahleliyo ukwenza umhlaba obonakalayo obonakalayo, ngelixa umbala omnyama ongwevu wawusetyenziswa ngokungacwangciswanga ukugxininisa amaqhina amancinci emithi kunye nemingxunya.
Iikhabhathi ezimnyama zincinci kancinci ukuya kuxinzelelo, kodwa kungenjalo akunakwenzeka. Kuxhomekeka kwinkangeleko ofuna ukuyifumana, indibaniselwano yeendlela ezahlukeneyo inokusetyenziselwa ukuxinisa iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama.
Iikhabhathi zekhitshi zaseFrance zihlala zisaziwa ngeepaneli zomnyango ezineenkcukacha kunye nokubumba. Eli khitshi lisebenzisa umbala omnyama omnyama ogqityiweyo kwiikhabhathi zalo, kodwa indawo ephakanyisiweyo yokubumba yenza ukuba kube lula ukuba isanti. Endaweni yokusebenzisa olunye ungqameko lwe-glazing olungenakubonakala lula kumgangatho wepeyinti omnyama, imiphetho ephakanyisiweyo yokubumba yayisanti isanti kwaye iphinde yagqitywa ukufezekisa isiphumo sokudakumba. Ngokufana nobuchwephesha ekuxoxwe ngabo kumzekelo odlulileyo, ezi khabhathi zimnyama zazisongwa nje kumda wokubumba. Ezi khabhathi zasekhitshini zichonge ngokukodwa iikona zangaphandle zokubumba ukunceda ukugxininisa iinkcukacha kunye nokufaka iipaneli. Ukuba uziva ngathi uyisanti ngokwaneleyo ukuze ubonakalise isiseko somthi ngumsebenzi omninzi, unokuxhalabisa iikhabhathi ezimnyama ngokusebenzisa ii-glazes / amabala / ipeyinti. Ngenxa yokuba umbala osisiseko umnyama kakhulu, kuya kufuneka usebenzise i-glaze e-opaque, yiyo loo nto abanye abantu bekhetha ukusebenzisa ipeyinti ecekethekileyo, njengoko ithwala ii-pigment ezingaphezulu ezibonisa ngokuchasene nomphezulu wekhabhathi emnyama. Lo mzekelo ubonakalisa ipeyinti emhlophe ebhityileyo esetyenziselwa ukunyanzelisa imiqolomba emincinci eyenziwe ngamaplanga kwisiqithi esimnyama sekhitshi.
Iiglasi ezimdaka ngombala kunye neetayi zinika ubushushu obukhethekileyo kunye nendalo xa zisetyenziselwa ukukhathaza iikhabhathi zekhitshi. Lo mbala unceda ukunika iikhabhathi ukufudumala ngakumbi kwaye unokusetyenziselwa ukufezekisa imeko efihlakeleyo okanye enesibindi ngokuthanda kwakho.
I-cornflower enhle yelizwe elihlaza okwesibhakabhaka ekhitshini yasekhitshini iyeyona ndawo kugxilwe kuyo ngenxa yempembelelo yayo eyahlukileyo. I-opaque beige glaze yayisetyenziswa kusetyenziswa ukubethwa ngebrashi ebuthathaka ukufezekisa ukujongwa kwesanti, ngaphandle kokuyinyanzela ipeyinti ukuya emthini. Umahluko weblue kunye neethowuni ezifudumeleyo ezenziwe ngetreyini nazo zenza imbonakalo eyahlukileyo.
Oku Ikhitshi elinesiqithi esikhutshiwe ifaka iikhabhathi ezinomdaka ogqityiweyo ngombala kunye necwecwe elimhlophe elikwi-quartz. Ukugqitywa kwezinto zangoku kunika enye indawo ye-rustic indawo yokuziva yoyilo lwangoku.
Le yikhitshi entle yesiFrentshi esebenzisa imifuno epholileyo enaminti edityaniswe neekhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Ukukhanya okukhanyayo okumdaka kakhulu kwakusetyenziswa kwiikhabhathi zasekhitshini ukongeza ukuhlamba kwetoni efudumeleyo kwisikimu sombala weetoni ezipholileyo ngenye indlela, sinceda ukufezekisa ibhalansi ngaphandle kokuya kwisikimu sombala wokuqala. A iinkuni ezixineneyo Ingasetyenziselwa ukugqibezela uyilo.
Ngokungafaniyo nemizekelo yangaphambili eyayinengxaki yokudakumba kancinci, eli khitshi liya kujonga ukubonakala koxinzelelo-ukuwohloka okungaphezulu / kwemozulu. Ukufezekisa oku, kwasetyenziswa umbala omnyama / opaque omnyama okwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ukuvelisa iziqwengana zomonakalo wepeyinti.
Ngelixa iikhabhathi ezibandezelayo zingcono zishiye ezandleni zoochwephesha kunye nabo banekhono lokupeyinta okanye ubugcisa, usenokwazi ngokulula DIY wena iikhabhathi esele zikho ukufezekisa inkangeleko yokudandatheka. Emva kwayo yonke loo nto, iikhabhathi zasekhitshini ezixinzelelweyo azikho malunga nokugqibelela, kodwa eneneni zibhiyozela amanqanaba ahlukeneyo okungafezeki ukufezekisa ukuziva ungonwabanga.
Iikhabhathi eziluhlaza kunye nohlaza zilungile ngokwenene ekusebenzeni kunye neeprojekthi zoxinzelelo, kwaye kulula nakwabaqalayo. Sebenzisa i-glaze emdaka ekhanyayo eyasetyenziswa ngobunono kwaye yarhuqelwa phantsi kumgangatho wekhabhathi, ukubonakala kwe-shabby-chic kunokufezekiswa ngokulula.
Ukusuka kule ngile ungabona ukujonga kufutshane nesiqithi sekhitshi esikhathazekileyo kunye nesinki yayo yendlu yefama yobhedu. Ikhabhinethi enkulu yepeyinti ejongene nemvelaphi yenza i-pantry ekhangelekayo.
Landela la manyathelo alandelayo ukudala isiphelo esidala kwiikhabhathi zakho:
Hlanganisa iikhabhathi zakho - susa zonke izixhobo zokusebenza kwaye uthathe iikhabhathi zakho, ukuba kunokwenzeka. Kuya kuba lula ukusebenza kwiikhabhathi zakho ngaloo ndlela.
Isanti - usebenzisa ibhloko yesanti okanye esinye isixhobo esifana neso, yisanti iikhabhathi zakho ukususa isicwebezelisi sesiphelo esele sikhona.
Coca - susa konke ukungcola okusaseleyo nothuli oluphezu komhlaba
Faka iAntiquing glaze - usebenzisa ibrashi, sebenzisa i-antiquing glaze (khetha umbala ofanelekileyo kumbala wekhabhathi yakho. Yenza uvavanyo lokuqinisekisa ukuba i-glaze ingafezekisa isiphumo / umbala) kwaye ususe ukugqithisa usebenzisa i-rag ecocekileyo.
Ukutywina - emva kokumisa iiyure ezingama-24 (okanye njengoko kubonisiwe kwi-antiquing glaze oyisebenzisileyo), faka isitywina esingatyheli ngaphezulu.
Ukuba okwangoku unamakhabhathi amhlophe ekhitshini ofuna ukuwaxhalaba, indlela elungileyo yabaqalayo kukumane ugungxule kwaye ugxininise kwiindlela zokumodareyitha. Le ndlela yokuphambanisa iyakhawuleza kwaye ilula kunokucinezela yonke indawo yekhabinethi.
Ukusukela ukubunjwa kwezi iikhabhathi zasekhitshini zincinci, i-glaze color glaze isetyenzisiwe ukuze ingagqithisi ngaphezulu kweekona kunye nemijelo yokubumba.
isipho somtshato somyeni kumhlobo
I-travertine tile yangasese
Ithini ibhayibhile ngomtshato